UGigaba uvakashele ihhovisi lomyango wezasekhaya eMgungundlovu | News24
UGigaba uvakashele ihhovisi lomyango wezasekhaya eMgungundlovu
UTHELEKE emahhovisi oMnyango wezaseKhaya eMgungundlovu ngempelasonto kungazelele muntu ungqongqoshe uMalusi Gigaba ezohlola isimo sokusebenza.
UGigaba uthe wenze lokhu emuva kokuthola izikhalazo eziningi ezivela kubantu ezinkundleni zokuxhumana ezifana noFacebook noTwitter ngokungagculiseki ngokusebenza kwehhovisi laseMgungundlovu.
Phakathi kwezinto athe abantu bakhala ngazo, imphatho yasebenzi bomnyango kanye nolayini abade.
Ekhuluma nabezindaba uGigaba uthe naye uzibonele ngawakhe olayini abade ekukhalwa ngabo.
“Labolayini abade badalwa izinkinga ezimbili. Eyokuqala ukuthi lilodwa ihhovisi eMgungundlovu, nokwenza kube nzima ngoba yidolobha elikhulu futhi elinabantu abaningi. UMnyango uyantula kwezezimali, awunayo ingqalasizinda yokuba namanye amahhovisi nokuqasha abanye abasebenzi ukuze abantu bangasebenzisi ihhovisi elilodwa.
Uthe isibalo sabantu sizophunguka uma umnyango usuqale uhlelo lokubhalisa ku-internet ngokusebenzisana namabhange noma amahhovisi angomahamba nendlwane eseqala ukusebenza ngoFebhruwari wonyaka ozayo.
“Inkinga yesibili ukuthi abaphathi balelihhovisi abahlomisiwe ngokwanele ukusebenza kulelihhovisi. Akufuneki abantu abazobhekana kuphela nomsebenzi abanikwe wona kodwa kufanele abaphathi bahlele ukusebenza ngendlela ukuze abantu bathole usizo.”
Eqhuba uthe kufanele ihhovisi lihlelwe kabusha ukuze abantu bathole ukusizakala nomsebenzi usheshe.
“Sizokwenza izinguquko ezizoqinisekisa ukuthi abantu bathola usizo abaludingayo. Akukwazi ukuthi kungaba nokheshiya oyedwa kulelihhovisi elisiza abantu abangaka. Sizokwengeza ngomunye ukheshiya okwesikhashana bese ezinye izinguquko siziqala ungakapheli unyaka.”
Uthe ehhovisi laseMgungundlovu izingxenye ezinolayini abade kakhulu ilapho kufakwa khona izicelo zomazisi kanye nezincwadi ezigunyaza ukungena kwamanye amazwe kanye nalapho kulandwa khona.
“Enye into ekufanele sibhekane nayo ukuqeqeshwa kabusha kwabasebenzi bethu ukuze bakwazi ukubhekana nalomsebenzi. Nabaphathi bamahhovisi ethu nabo kufanele bacijiswe ngamakhono ukuze bakwazi ukubhekana nomsebenzi wokusiza abantu.”